युगसम्बाद साप्ताहिक - चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा
Saturday, 05.30.2020, 04:11pm (GMT+5.5) Home Contact
नेता र मन्त्रीहरु भाषणको उछिनपाछिनमा हुन्छन् । एउटाले एकथोक भन्यो भने अर्काले अर्कोथोक भन्नैपर्छ, नत्र उभन्दा आफू कसरी जान्ने कहलाउने ? एउटाले गरेको काम राम्रै भए पनि त्यसैलाई समर्थन ग¥यो भने आफ्नो विशेषता नै के रह्यो ? यस्तै सोचाईबाट शासकहरु ग्रस्त छन् । भनेर मात्रै हुने भए धेरै कुरा भनिसकेका छन् । यहाँ सबै कुरै मात्र गर्ने त भए । चुनावका बेलामा त झन् अघोरै गर्छन्, तर अर्को चुनाव आउँदासम्म हराउँछन् अनि जुर्लुङ्ग निस्कन्छन् अर्कै नारा लिएर । वर्षौंवर्षदेखि यस्तै निरर्थक चक्र चलिरहेको छ ।
देशमा केही भएको छ भने भुइँफुट्टाहरु आकाश छुने भएका छन् । राजनीतिका नाममा धुलोबाट धुरीमा पुगेकाहरु पनि देखिन्छन् । नेता नामधारी त्यस्ता टपर्टुइयाहरु तस्करी धन्दा चलाउने कालाबजारियासंगको मिलोमतोमा मालामाल भएका पनि छन् । यसरी हिजोसम्म हरिकंगाल एकछाक औदादौला भएका छन् एकातिर भने अर्कातिर सामान्य जनता उठ्नै नसक्ने गरी अँट्ठिएका छन् । यहाँ कुनै पनि काम सर्वसाधारण जनताको स्वार्थलाई हेरेर भए गरेको पाइँदैन । बिना सोचविचार सबैतिर हाउडे चाल छ ।
चन्द्र शमशेरले करियामोचन गर्दा पनि पशुपति अमालबाट पैसा झिकेर धनीको ऋण तिरिदिएका थिए भने यहाँ हलिया र कमैया मुक्त ग¥यौं भने पनि सरकारले कानेकौडी दिएको होइन । बरु तिनै जमीनदारलाई अनुरोध गरेर केही जग्गा दिलाइदिएका भए पनि अलपत्र त पर्ने थिएनन् । कम्तिमा बास त हुन्थ्यो । मुक्त भइस भनेर अलपत्र छोड्ने काम मात्रै भयो । अनि कुनै उपाय नलागेर कतिपय कमैया र हलिया उनै जमीनदार र मालिकका शरण पर्न बाध्य भए । विवेक विचार पु¥याएर आफ्नो दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेका यस्ता अनेक उदाहरण छन् । जनताका मर्म छामेर, उनका आवश्यकता बुझेर काम गर्ने प्रवृत्रि भएको भए आज देशको यो बेहाल हुने नै थिएन, सबै खाइद्यौ मात्रै भए ।
नेता र मन्त्रीहरु ठूलठूला कुरा हाँक्छन्, तर तत्काल गर्नुपर्ने सानो काम पनि गर्न सक्दैनन् । जनतालाई यहाँ अहिले नै के खाउँ र के लाउँको समस्या छ तर, वास्तविकता बुझेर काम गर्नुसट्टा उनीहरु सिगात्सेको रेल, कोलकाताको पानीजहाजको गफ गर्छन् । एः बाबा ! रेल र पानीजहाज ल्याउँदै गरे हुन्छ, पहिले छाकटार्ने र आङ ढाक्ने मेलो त गर । कमाइको बाटो क्यै छैन, काम नपाएर युवाशक्ति विदेशिएको छ । विदेशमा मजदुरी गरेर ल्याएको पैसा विदेशबाटै बेसाएर ल्याउँदैमा सिद्धिन्छ । दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडा जस्ता दैनिक उपभोगका सामान बाहिरैबाट ल्याउनुपर्छ । जगाजमीन बाँझै छन्, आफ्नो उत्पादन क्यै छैन । चाडबाड आउँछन्, खसीबोका, फलफूल समेत बाहिरैबाट ल्याइन्छ । जति दुःख गरेर ज्यान जोखिममा पारेर कमाए पनि पानीझैं पैसा बगेर बाहिरै गएको छ । नेपाल विदेशीको एकाधिकार बजार बनेको छ । तैपनि सरकारका आँखा खुल्दैनन् । यस्तो बिजोगको स्थिति भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ आज ।
देश बनाउँछौं भनेर फुक्ला गफ हाँक्ने नेताहरुकै बेइमानीले गर्दा आज देश बेहाल स्थितिमा पुगेको छ । राजनीतिक अधिकार केही समय संकुचनमा भए पनि पंचायतकालमा अभूतपूर्व रुपमा विकास निर्माणका काम भएका थिए । त्यो बेला मनोमानी गर्न नपाएका नेतालाई अप्ठ्यारो भए पनि जनतालाई सुबिस्ता थियो । मित्रराष्ट्रहरुले अनुदानमा उद्योग–धन्दा– कलकारखाना स्थापित गरिदिएका थिए । कपडा, जुत्ता, कागज, चिनी, चुरोट, सिमेन्ट, इँटा टायल, कृषि औजार कारखानाहरु फाइदामै चलेका र जनताले काम पाएका थिए । कपास खेती राम्रै हुन थालेको थियो । राजमार्गहरु बनेका थिए । देशमै औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । हिमाली भोगमा भेडा–च्याङ्ग्रा पालन, फलफूल खेती थियो । धेरै कुरामा देश आत्मनिर्भर थियो । जिल्लाहरुमा अधिकार विकेन्द्रित भैरहेको थियो । पछि गएर बाहिरियाका मतिमा लागेर भएका कारखाना पनि कमिशन खाएर बेचे । भएका पूर्वाधार ध्वस्त पारे । आज देश हरिकंगाल स्थितिमा पुगेको छ । बनाउन पो गाह्रो बिगार्न कतिबेर लाग्दो रहेछ र ?
आज देशको युवाशक्ति काम नपाएर विदेशमा भौतारिएको छ । नेता र मन्त्रीकाा हावादारी भाषण बाहेक केही छैन । यो देश खास गरी कृषि र उद्योग–धन्दामा आत्मनिर्भर भयो भने आफ्नो माल बिक्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने कुत्सित मनसाय राख्नेहरुले यहाँ विकास होस् भन्ने चाहँदैनन् र सकेसम्म व्यवधान खडा गरिन्छिन् । हाम्रा नेता भनाउँदा चाहिं त्यस्तैका इशारामा चलेर आत्मघात गर्दैछन् । त्यसैले बुझ्नुपर्ने के हो भने जबसम्म आफ्नै उत्पादन गर्न सकिंदैन तबसम्म देश अडिन सक्दैन र विदशेमा मजदुरी गरेर जति नै कमाइ गरेर ल्याए पनि त्यो पैसा विदेशतिरै बगेर गएको छ । त्यसकारण सरकारले केही गर्ने नै हो भने यो ग्यासका पाइप, रेल र पानीजहाजका गफ छोडेर उत्पादन वृद्धिकै योजना–कार्यक्रम संचालन गर्न कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुँदैन । आजकै स्थितिमा रेल ल्याएर के गर्ने ? भारतबाट सामान भरेर आएका ट्रक यहाँबाट रित्तै फर्किरहे जस्तै रेल पनि रित्तै फर्कने त हो ।
त्यसकारण आफ्नै उत्पादन बढाएर चुहुने भाँडो नटालेसम्म प्रगति सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेर काम नगरे अर्काको माल किने–बेचेर अब नेपाल अडिदैन । त्यसैले अब पनि फजूलका भाषण छोडेर खास गरी कृषिका विविध पक्ष र उत्पादनमूलक धन्दातर्फ विज्ञहरुलाई संलग्न गराएर कामको थालनी गर्न कत्ति पनि विलम्ब गर्ने समय हामीसंग छैन । जति ढिलो हुन्छ, उति नै हामी कमजोर हुँदै जान्र्छौं । अब सम्पूर्ण ध्यान र साधन एकत्रृत गरेर अघि बढ्न अझै पनि आलटाल गरियो भने हामीलाई बचाउन कोही आउने छैनन् । त्यसैले अब सबै छोडेर आजको पराधीनताबाट पारलाग्ने बाटो समातिहाल्नुपर्ने समयको ताकेतालाई अझै पनि उपेक्षा गरियो भने परिणाम अझ बढी दुःखदायी हुनु निश्चित छ ।